के अब नेपालमा साचिकै सेना परिचालन होला त ? | Butwal Dainik
के अब नेपालमा साचिकै सेना परिचालन होला त ?
२०७७ जेष्ठ २, शुक्रबार (१ साल अघि)
काठमाडौं, २ जेठ । कोरोना संक्रमितको संख्या विस्तारै काठमडौं लगायतका जिल्लामा पनि बढ्न थालेपछि सरकार सचेत हुन थालेको छ । नेपालमा अब कोरोनाले भयावह अवस्था आउन सक्ने भन्दै सरोकारवालाहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देखि सरकारका उच्च अधिकारीलाई कोरोनाको जोखिम बढ्दै गएको सूचना दिएका छन् । विदेशबाट फर्किएकामा देखिने गरेको संक्रमण समुदायमा पनि देखिनथालेपछि सरकार सचेत भएको छ ।
लकडाउन कडा बनाउँदा पनि कोरोना प्रभावित जिल्लावाट काठमाडौंमा लुकेर मानिस भित्रिएका छन् । आवागमन रोकिएको छैन । भारतवाट लुकेर नेपाल भित्रनेको संख्या पनि उस्तै छ । अहिलेसम्म कोरोना पुष्टि भएका अधिकाँश वाहिरवाट आएका देखिएका छन् ।
भारतमा रेल सेवा सुचारु गरेर त्यहाँ रहेका ठूलो संख्याका नेपालीलाई सिमानामा ल्याएर छोड्न थालिएको छ । जसका कारण थप कोरोनाको खतरा बढेको छ । प्रहरीले मात्र त्यसको ब्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री लगायत सरकारका मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कतिपय ठाउँमा प्रहरीलाई अटेर गर्नेहरु पनि देखिएका छन् । नेपालगन्ज, दैलेख लगायतका स्थानमा लकडाउन पालना गराउँदा आ क्रम ण भएको थियो । प्रहरीले मात्र यस्तो अवस्थाको ब्यवस्थापन गर्न नसक्ने आँकलन गरेर सरकारले अब सेना परिचालनको तयारी गरेको बुझिएको छ ।
सेनालाई सम्भावित जोखिमसँग लड्नका लागि तयार हुन भनिसकेको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । नेपाली सेनाले अहिले विदेशवाट स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काम गरिरहेको छ । क्वारेन्टाइन निर्माण देखि सुरक्षाका काममा पनि प्रहरीलाई सघाइरहेको छ ।
शुरुमा काठमाडौं उपत्यकाको चारतर्फका मुख्य नाकामा सेना परिचालन गर्ने तयारी भएको बुझिएको छ । सेनाको आफ्नै स्वास्थ्य टोली र सुरक्षा प्रबन्ध भएका कारण पनि सजिलो हुने अनुमानका साथ यस्तो तयारीमा सरकार लागेको हो ।